Ahoana ny fitrandrahana Dogecoins (fametrahana sy fampiasana) | Avy amin'ny Linux
ny virtoaly virtoaly Nanjary lamaody izy ireo tato ho ato, ny malaza indrindra dia:
Saingy hifantoka amin'ny iray indrindra isika:
1.1 Fa maninona no toa meme amiko? ee
2 Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ny Linux (Soso-kevitra hampiasaina amin'ny rafitra x64):
3 Ny ahy amin'ny Android:
Fa maninona no toa meme amiko? ee
Satria mifototra amin'ny meme Internet malaza «DogeAlika izay Shiba inu. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fitsidiham-bola ianao: Dogepedia Wikipedia
Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ny Linux (Soso-kevitra hampiasaina amin'ny rafitra x64):
Ho ahy dia tsy maintsy apetrakay ireto fiankinan-doha ireto:
Amin'ny Ubuntu na ny derivatives (Angamba mety hiasa amin'ny Debian):
Ampidininay amin'ny SRC ny fonosana:
Mandehana any amin'ny folder cpuminer-2.3.2:
Forony ny Makefile:
Atombohy ny fitrandrahana!:
Tsy maintsy soloinao ny «mpampiasa» «mpiasa» sy «tenimiafina, noho izany dia mankany amin'ny tranonkala manaraka izahay ary misoratra anarana: Pejy fisoratana anarana
Vantany vao voasoratra anarana dia tsy maintsy manohy manamarina ny kaontinay izahay amin'ny mailaka hahatratra ny kaontinao. Rehefa voamarina ny kaonty dia miditra isika.
Hahita ny tenanao ao amin'ny Dashboard ianao, eto izahay dia hiditra ny faritra My Workers, ao anatin'ny My Workers dia hamorona Worker miaraka amin'ny anarana sy teny miafina tianao. Vantany vao vita izany dia manohy manamboatra ireto baiko manaraka ireto izahay:
Izahay dia manolo ny "mpampiasa" amin'ilay mpampiasa nampiasanao azy hisoratra anarana amin'ny nut2pools, "mpiasa" amin'ny anaran'ny Mpiasa izay noforoninay teo aloha ary "tenimiafina" amin'ny tenimiafin'ny Worker NOT an'ny mpampiasa.
Vonona! Efa mitrandraka ianao, hitanao ny isan'ny Dogecoins nitrandraka tao amin'ny Dashboard
Ny ahy amin'ny Android:
Raha hitrandraka amin'ny Android dia afaka mametraka ity fampiharana manaraka ity isika avy amin'ny Play Store:
Vantany vao tafapetraka izahay dia mandeha amin'ity tranonkala manaraka ity ary misoratra anarana: Pejy fisoratana anarana
Hahita ny tenanao ao amin'ny Dashboard ianao, eto izahay dia hiditra ny faritra My Workers, ao anatin'ny My Workers dia hamorona Worker miaraka amin'ny anarana sy teny miafina tianao.
Vantany vao vita izany dia manokatra DroidMiner izahay.
Ao amin'ny «URL an'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany» napetrakay:
Ao amin'ny "Username" dia apetrakao ny anaran'ny mpampiasa ny pejy izay nisoratanao anarana teo aloha, ny fe-potoana iray sy ny anaran'ny Mpiasa noforoninao, ohatra: user.worker
Ao amin'ny «Password» ny teny miafin'ny mpiasa TSY ny mpampiasa.
Ao amin'ny «1», safidio ny isan'ny cores an'ny findainao.
Safidio ny safidy «LTC / DOGE / XPM» ary kitiho ny «Start»
Vita, mitrandraka ianao! hitanao ny habetsahan'ny Dogecoins nitrandraka tao amin'ny Dashboard
Misy ihany koa ny fitrandrahana Dogecoins amin'ny MS Windows, fa satria Free Blog ity bilaogy ity dia tsy napetrakao ny fomba. 😉
Adiresy pss my Dogcoins 🙂 DAQVhckjg72YsLWXTGUqzu46gbH9Phcq79
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fitrandrahana Dogecoins (fametrahana sy fampiasana)
Mahaliana ity lohahevitra momba ny Currency Virtual. Satria tsy mahalala na inona na inona momba ny toekarena aho, dia tsy azoko hoe inona no azon'izy ireo omena lanja. Ho an'izany dia tsy mila backup ianao, milaza amin'ny volamena na zavatra metaly?
Nandre momba ny Bitcoins foana aho, saingy hitako fa mbola misy maro hafa solony .. Tsy maintsy handalina lalina kokoa an'ity raharaha ity aho raha hijery hoe manao ahoana izany.
Hitako koa fa liana be ilay "fitrandrahana harena ankibon'ny tany" .Misy fetrany ve? Afaka mahazo vola tsy misy fetra ve aho?
Raha teorika dia misy fetrany. Ny tiana hambara dia ny teboka iray izay tsy ahafahan'ny vola "foronina" intsony amin'ny rivotra mahia.
Amin'izao fotoana izao ny vola rehetra, na virtoaly na tsia, dia misy vidiny ihany satria misy ny olona mino fa misy dikany izany, ary manaiky ny fandoavam-bola amin'ny vola manokana satria mino izy ireo fa io vola io dia horaisin'olon-kafa hanome azy ireo tsara na serivisy. Tombantombana madio, wow.
Ity misy lahatsoratra iray tena tsara izay manazava ny tombony lehibe amin'ny vola nentim-paharazana noho ny virtoaly:
drarko dia hoy izy:
"Misy ilana azy ihany ny zavatra sasany satria misy ny olona mino fa misy zavatra ilaina, ary manaiky ny fandoavam-bola amin'ny vola manokana satria mino izy ireo fa hisy olon-kafa hanaiky an'io vola io hanomezana azy ireo soa na serivisy"
Aona! Toy ny vola madinika tena izy ...
Tsy misy manaraka ny fenitra volamena, na ny hafa. Ny tahiry niorenany (loharanon'ny "fahatokisany") dia vola hafa "heverina ho" matanjaka kokoa ...
Mamaly an'i drarko
«Androany ny vola rehetra, virtoaly na tsia ...»
Amin'izao fotoana izao dia virtoaly ny vola rehetra. (tsy virtoaly ny computing virtoaly)
Ny fitrandrahana dia mitovy amin'ny fiasa amin'ny vola madinika. Manome ny ampahany amin'ny fahaizanao computing amin'ny tamba-jotra cryptocurrency ianao, hahafahany manao ny orinasany, ary ho setrin'izany dia mandoa anao izy ireo amin'izany vola izany. Farafaharatsiny mba izay no takatro.
FGuardia dia hoy izy:
Salama Elav, ny vola madinika taloha dia mendrika ny vy nanaovana azy ireo ary ny fanitsakitsahana an'io vy io dia mety hiteraka fatiantoka amin'ny fanjakana sy korontana maro. Taorian'izay dia nanomboka nifototra tamin'ny fenitra volamena ny vola madinika, izay midika fa ny vola madinika tsirairay dia "mitentina X peso volamena" fa hatramin'ny krizy solika tamin'ny 1973 (fony mbola zaza ianao xD 😛) dia tsy tokony hanana sanda ireo vola ireo tohanan'ny tsy misy na inona na inona, izy rehetra dia vinavina avokoa ary "matoky fa handoa anao ny firenena namoaka." (Ity dia tena ambony dia ambony ary tsy manoro hevitra anao aho hamaky amin'ny wikipedia satria ity lohahevitra iray manontolo ity dia nosoratana toa ny boriky).
Satria ny toekarena iray manontolo dia mifototra amin'ny dolara ankehitriny, Etazonia dia afaka mamatsy vola ny tenany amin'ny sandan'ny sandan'ny sandam-bola mba handoavana ny trosany. Izay antsoina matetika hoe "tapakila fanontana." Na izany aza, satria ny ambin'ny vola dia miankina amin'ny dolara avokoa, dia voatery mandany vola izy ireo mba tsy ho lafo be eo amin'ny tsena. Mba hanomezana hevitra anao, ny EU, Japon ary Etazonia dia efa nanonta an-tapitrisany ny vola taratasy nandritra ny taona maro nefa tsy nijanona satria manandrana mitazona ny vola tsy miovaova ... tsena (ary hanaparitaka anao tokoa izy io).
Na mihoatra izany aza.
Valiny amin'i FGuardia
Silzul dia hoy izy:
Ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany dia azonao atao ny mitrandraka izay voalamina ao amin'ny algorithm amin'ny vola, amin'ny voalohany dia maro no vokarina miaraka amin'ny loharano vitsivitsy ary bebe kokoa ny loharanom-pahalalana, ny fetra dia mitombo tsikelikely.
Tsy misy vola manana fanamarinana tena izy fa fictif, ny tiako holazaina dia ny fahatokisanao ny firenena namoaka azy na ny fikambanana. Ny dolara am-polony taona maro dia tsy manaraka ny fenitra volamena intsony ary ny ambiny koa.
Manantena aho fa tsy hanao fahadisoana ara-teknika. Tsy dia mahay loatra an'io lohahevitra io aho.
Valiny tamin'i Silzul
Tsy araka ny filazanao azy fa ny vola araky ny fitsipika ankapobeny dia mifototra amin'ny anton'antoka fitokisana ateraky ny toekarem-pirenena, fa ny lanjany koa dia fehezin'ny fanjakana, ohatra mazava dia ny tamin'ny nitenenan'i Obama ny filoha sinoa hiala hampihena ny sandam-bola ho fanasoavana ny fanondranana, na ilay zavatra mitovy amin'ny ataon'i Venezoela amin'ny alàlan'ny fampihen-danja ny vola. Ohatra iray hafa mazava koa fa ao anatin'ny krizy any amin'ny faritra Euro, ny fiovana Euro yen dia nihena ho ambany indrindra ara-tantara, ny zava-drehetra dia mifototra amin'ny fahatokisan-tena ateraky ny faritra na firenena, ary ny fanohanana ara-toekarena.
Bitecoins dia mifototra amin'ny hoe tadiavin'ny mpampiasa na tsia, ny zanabola napetrak'izy ireo dia tsy azo ampitahaina amin'ny vola tena izy.
Fisalasalana roa ihany: 1) Ny algarisma hovahantsika hahazoana ireo Dogecoins ireo dia ampiasaina amin'ny inona? 2) Misy interface misy sary ho an'ny KDE?
Raha miasa izy ireo, amin'ny zavatra maro ... manadihady 😀
ary manontany tena aho hoe maninona ianao no mila interface interface sary?
Oay! Vola be, manankarena tokoa
HaPK dia hoy izy:
Izaho dia mitrandraka Dogecoins nandritra ny fotoana kelikely, fa mampiasa cgminer fa tsy cpuminer (manararaotra ny fisian'ny AMD GPU: D) [vola madinika maro, manan-karena be, crypto be]. Raha tianao dia azoko atao ny manazava ny fomba fitrandrahana izany.
Raha izany, tsy fantatrao ve ny fomba mora kokoa hananana poketra Dogecoin amin'ny linux nefa tsy mila misintona sy manangona avy amin'i Git mivantana? Maniry aho fa hisy trano fitahirizana ... Ah andraso, hiampita izany, nahita trano fitahirizana XD aho https://launchpad.net/~cwayne18/+archive/doge
Zavatra mahafinaritra ny mahazo vola "tsy ho aiza", fa raha ampitahaina amin'ny vola nentim-paharazana dia tsy dia mendrika loatra ... Ny hany tokana antenaina dia ny hankasitrahan'ny cryptocurrency na ... miandry ny vola nentin-drazana hampihena ny vidiny. Miandry ny andro fotsiny aho rehefa tsy miankina amin'ny karazana vola velona intsony (na ny kriptocurrency irery ihany no manana ny tena sandany).
Valiny amin'i HaPK
Raha ny fahitako azy ho mpanara-maso, ny vola rehetra amin'izao fotoana izao, na inona izany na inona, dia toa manohana bebe kokoa amin'ny toekarena sy ny famokarana ny firenena na vondrona izy ireo, ka ny Etazonia izay mamokatra sy manafatra entana mahaliana dia tena sarobidy tokoa amin'ny maha-tsena azy. miteraka tombony
Teboka na fanontaniana hafa mipoitra amiko. Firy ny fivarotana an-tserasera no nampihatra ny fividianana amin'ity karazana vola ity? Aiza no mety hividianako ohatra amin'ny Dogecoins?
Tsy ao amin'ny magazay inona no azonao vidiana amin'ny dogecoin .. Ny lakileny dia ny fifanakalozana Dogegoin ho Bitcoin ary avy eo fantatrao .. Na mividy amina magazay miaraka amin'ny Bitcoins ianao na mamindra azy ireo any amin'ny kaontinao: D.
Azonao atao ny manova ny Dogecoin ho Bitcoin eto: https://bter.com
Io no ampiasaiko tsy misy olana
Ireto misy zavatra tsy hita .. Ampidiro ao amin'ny rafitrao ny poketra dogecoin. Ka nametraka fampianarana aho ...:
sudo aptitude update && sudo apt-get install libssl-dev libdb-dev libdb ++ - dev libqrencode-dev qt4-qmake libqtgui4 libqt4-dev libboost1.48-dev libminiupnpc-dev libminiupnpc8 libboost-system1.48-dev libboost-filesy dev libboost-program-options1.48-dev libboost-thread1.48-dev libboost-chrono1.48-dev hanorina-tena ilaina
Ary voila 😀
zypper ao amin'ny libopenssl-devel manatsara ny fampivoarana-devel git libdb-4_8 libdb-4_8-devel libqt4-devel
Alohan'ny hametrahana ny baiko fanaovana dia ilaina ny manova ny MAKESON. Ao amin'ny tapany INCPATH, ampio amin'ny faran'ny tsipika ity: -A / usr / tafiditra / db4.8
soymicmika dia hoy izy:
Fa inona ny portfolio?
Amin'ny fomba mihazakazaka amin'ny fihazakazahana Debian sy "fitrandrahana" 🙂
Manana ny volanao amin'ny pc fa tsy amin'ny Internet fampiantranoana 😀
Javier Yañez dia hoy izy:
Fantatrao izany rehefa manatanteraka ny baiko
-e expression # 1, toetra 1: baiko tsy fantatra: " "
isaky ny baiko.
ary avy eo rehefa manao ny "make" dia mahazo aho:
*** Tsy misy kendrena voafaritra ary tsy misy makefile hita. Avo.
Valiny tamin'i Javier Yañez
Tsy fantatro manokana izany, fa ny tiana hambara dia ny Bitcoins manokana efa mandeha ho an'ny SLI hatramin'ny karatra 4 raha tsy namaky tsara aho satria mivoatra ny olana matematika ary sarotra kokoa amin'ny PC ny mamaha azy ireo ... raha ny fahitako azy dia ny Ny vidin'ny fitaovana enti-miampy miampy ny fandaniana amin'izao fotoana izao dia tsy mihoatra ny sandan'ny vola ho azonao.
nemecis1000 dia hoy izy:
Voavahan'ny PPC izany olana izany
Valiny amin'ny nemecis1000
Championship dia hoy izy:
Miaraka amin'ny baiko farany azoko ity:
"./Minerd: tohan-kevitra tsy tohanan'ny safidy 'mpampiasa.worker: teny miafina'
PS: nosoloiko ny "mpiasa" "tenimiafina" sy "mpampiasa", saingy mazava ho azy fa tsy afaka mamoaka azy ireo aho. Inona no mitranga?
IvanLinux dia hoy izy:
Azonao antoka ve fa tsy diso ianao?
$ ./minerd –url stratum + tcp: //dogeu.nut2pools.com: 5585 –userpass user.worker: teny miafina
Tadidio fa misy ny adihevitra –url sy –userpass
Valio amin'i IvanLinux
eo amin'ny pejy fisoratana anarana dia noforoninao tamin'ny fomba tsara ny mpiasanao? Nataoko tsy nisy olana izany
Mitrandraka ... misaotra tamin'ny fandraisana anjara.
wow farantsa maro
doge toy izany tombony be
ka crypto wow
Ao amin'ny Arch Linux no ahitanao ny fonosana ao AUR.
Fampianarana tena tsara izao isaky ny te hanomboka hitrandraka indray aho dia mila manao ireo dingana tsirairay ireo na avy aiza no manomboka.
ary inona no azoko vidiana amin'ity vola crypto ity?
Takalo amin'ny bitcoin izy io, azonao atao ny manakalo bitcoins amin'ny dolara na amin'ny toerana sasany azonao ampiasaina.
Raha te hitrandraka indray ianao dia mankany amin'ny fampirimana, manatanteraka efijery ary soraty ny baiko lava izay misy ny mpampiasa anao, ny mpiasa ary ny tenimiafin'ny mpiasa.
Malemy dia hoy izy:
Ahoana no anaovanao ny adiresy ampahibemaso?
Mamaly an'i Mou
Ao amin'ny adiresy coin no apetraka?
Allan herrera dia hoy izy:
Azafady, fa ny rohy mankamin'ny pejy fisoratana anarana dia tsy mandeha, mety misy olona mandalo ahy ve ny URL PLEASE?
Valiny tamin'i Allan Herrera
WILLIAM E BANKS dia hoy izy:
Mino aho fa lany andro ity fampahalalana ity ary / na ny «site» nut2pools dia maty! Mahavariana ny fanavaozana fa raha tsy eo intsony ny «site» an'ny nut2pools dia heveriko fa tsy hiteny intsony!
Valiny amin'i WILLIAM E BANKS
ExMplayer: Multimedia mpilalao miaraka amin'ny fanohanana 3D, Facebook ary maro hafa